Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharahan-tany: Olona 3.000 indray no voasoky
Raharahan-tany: Olona 3.000 indray no voasoky
Sanatriavin’ny vava ve dia tsy hahitam-panafana intsony ity olana amin’ny fizakan-tany ity ety amintsika ? Toa mitombo andro aman’alina mantsy ny olana miseho, ary mihamaro ny fahasahian’ny olona sasany manao hosoka sy misoloky momba azy io. Olona 3.000 any no ianjadian’ny fisolokiana tany nataon-dRamangasoavina Gérald, raha ny eny amin’ny faritr’Anjeva sy Ambohimalaza iny manokana no asian-teny. Efa telo taona ngarangidina no narirariran-dry zareo mitonona ho mpivarotra tany ireo olona amin’arivony (3.000) ireo. Mody misalotra anarana amin’ny hoe “Opération Tany Gasy” ry Gérald Ramangasoavina, hoy ny akon’ny fanadihadiana, nefa na izy aza hatramin’izany telo taona lasa izany, tsy sahy nihaona tamin’ireo olona nisolokiany fa mpiasany no asainy mifampiresaka amin’izy ireo.
Ny ben’ny tanàna amin’ireo faritra nambara fa misy ny “Opération Tany Gasy” ireo dia nahenoana akony taty aoriana fa hoe “nikatso io tetik’asa (opération) io satria na ilay tany aza mbola amin’izany Rakotonirina Jean Fidèle izany no misoratra.” Rehefa nokarohina tamin’ny toerana nahafantarana fa misy azy indray ity Rakotonirina Jean Fidèle ity dia fantatra ny manodidina koa fa efa maro ny olona nitady azy io tao fa tsy mipetraka ao izy io fa olona mpisoloky tany koa.
Voatery nitondra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana ireto nianjadian’ny asa fisolokiana, ary efa eny ampelatanan’ny pôlisy mpanao famotorana moa ny raharaha izao.
“Tsy mieritreritra ny hahazo ny tany nifampiraharahana taminay intsony izahay, hoy ireo tra-pahavoazana, satria na ny toerana nifanarahana fa misy an’ilay tany aza, efa niova fa lasa any ambanivohitra lavitra raha eny Ambatolampikely, ohatra, no nifanarahana. Ny volanay no takianay mba hiverina”, hoy ny maro amin’ireo voasolokin-dry Ramangasoavina Gérald.
Dia mbola hisy rafi-pitsarana na fanjakana hiaro ihany ve ry Ramangasoavina Gérald amin’izao raharaha izao sa mba hanam-pianiavana hanampy an’ireto nianjadiam-pisolokiana ?